Shir Wada Tashi Ah Oo Kadhacay Xarunta Gobolka Dhaawa Ee Leeyi - Cakaara News
Shir Wada Tashi Ah Oo Kadhacay Xarunta Gobolka Dhaawa Ee Leeyi
Leeyi(cakaaranews)Khamiis, 6da, July, 2017. Maamulka Gobolka Dhaawa oo uu ugu horeeyo Gudoomiyaha Gobolka Dhaawa mudane Maxamed Kaahin ayaa shir wada tashi ah layeeshay shaqaalaha iyo bulshada qaybaheeda kaladuwan. Shirkaas oo lagaga wada arrinsanayay dhinacyada adeeg bixinta shaqaalaha, kaqaybgalka bulshada dhinacyada horumarka iyo maamulka suuban.
Hadaba, shirkan oo kaqabsoomay hoolka shirarka ee xarunta gobolka Dhaawa ee leeyi ayaa waxaa ugu horayn kahadlay Gudomiyaha Gobolka Dhaawa mudane Maxamed Kaahin oo sheegay in shirkan lagaga wada hadlayo dhanka adeeg bixinta shaqaalaha, kaqaybgalka bulshada ee dhinacyada horumarka, nabadgalyada iyo maamulka suuban iyo waliba kamidho dhalinta qorshayaasha Kobaca iyo Isbadaka dhaqaalaha wajigiisa 2aad. Gudoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in shirkani uu yahay mid lagu saxayo galdalooladii kajiray dhanka adeeg-bixinta ee sanad miisaaniyadeedkan 2009T.I islamarkaana maamulka iyo shaqaalauhu ay jihooyin horumarineed ku kalaqaadanayaan hirgalinta qorshayasha sanad miisaaniyadeedkan 2010 T.I.
Dhankiisa, Gudoomiyaha Degmada Mooyaale mudane Idiris Xasan oo isna shirkan kahadlay ayaa sheegay in cududa sahqaalahu ayyihiin tiirasha ugu muhiimsan ee horumarka islamarkaana ay lagama maarmaan tahay in shaqaaluhu uu bixiyo adeeg hufan oo tayoleh.
Ugudanbayna kaqaybgalayaashii oo adreenkooda kahadlaya ayaa sheegay in ay sii laba jibaarayaan dadaalada shaqo ee adeeg-bixintaislamarkaana ay balan-qaadayaan inay kaqaybqaataan horumarka nabadgalyada iyo maamulka suuban ee kasocda deegaanka.